Shuruudaha Oo Xaaladda - Dooro Your Bonus
Shuruudaha Oo Xaaladda – Dooro Your Bonus
bonus Tani waxay noqon doontaa firfircoon u dhexeeya 26-January-1-dii February 2017 GMT.GMT waxa uu u dhigmaa ee -9.30hrs ACST, -1hr THIS, PTZ + 8hrsDeposit ugu yaraan £ 10 iyo aad u hesho a 50% deposit kulan ilaa bonus in £ 100 AMA deposit ka badan £ 200 oo aad u hesho 10% ilaa £ 25 oo lacag caddaan ah.
bonus Tani waxay khusaysaa oo kaliya in ay total kayd aad muddadaas xayaysiis.
Bonus ama lacag caddaan ah kor ugu qaadi doonaa si ay u 3 maalmood oo shaqo ka dhamaadka dhiirrigelinta in la kala jebiyo si aad shuruudaha wagering account.Standard of 30x lacagta bonus codsan hor bonus ama wax u dhigma guuleystayna noqon karaa.
Managment xaq u leedahay inay joojin, joojin ama bedeli tartan kasta ama dhiirrigelinta (ama xeerarka oo dhan) waqti kasta oo aan ogeysiis ka hor.
Shuruudaha Guud iyo Xaaladaha codsan. Go'aanka Management ee waa final kiisaska oo dhan.